Chii chinonzi nhetembo yekuona? | Zvazvino Zvinyorwa
Encarni Arcoya | | Updated on 23/06/2020 14:43 | Literature, dzakawanda
Iyo dudziro yekuona kana yekufananidzira yechero rondedzero yemhando yakagara ichindikonzera kumwe kufarira, pamwe nekuti kudiwa kwekumutsa mifananidzo yakatarwa kuburikidza netsamba kunoguma nekumiririrwa kwakawanda pakarepo
Mifananidzo inomuka kubva mumabhuku, hunyanzvi hwekumadhorobha hwakafemerwa nemabhuku uyezve nhetembo dzinoonekwa, chimiro chekuyedza umo hunyanzvi hwepurasitiki hunokunda mavara (kana zvinopesana), kuwana mhedzisiro seyakaenzana sezvo iwo asingagumi. Unoda kuziva chii nhetembo dzinoonekwa uye uwane mimwe mienzaniso?
1 Mitsara yenhetembo
2 Kwakatangira nhetembo dzinoonekwa
2.1 Zvipikiso zvezvinyorwa zvekuona
2.2 Nhetembo dzinoonekwa muSpain
3 Mhando dzenhetembo dzinoonekwa
3.1 Nhetembo dzinoonekwa chete typographic
3.2 Iyo inosanganisa mavara nemadhirowa
3.3 Iyo inokweva nemavara (ndiyo yakachena nhetembo inoonekwa, nekuti yakavakirwa pamacalligrams)
3.4 Sanganisa tsamba nependi
3.5 Sanganisa tsamba uye kutora mifananidzo
3.6 Gadzira collage
3.7 Nhetembo dzinoonekwa pavhidhiyo
4 Iko kushanduka kwenhetembo dzinoonekwa: cyberpoetry
Futurism Icho chaive chiitiko chehunyanzvi chakabuda pakutanga kwezana ramakore rechimakumi maviri uye icho chaizotangira Cubism, chimiro chakasvitswa nevanyori vakaita saPicasso kana Bracque chinangwa chavo chaive chekudzokorodza nhoroondo yepasirese nekunyanya kushandiswa kwemavara kana mazuva ano sechinhu chakakosha che avant-garde kutsvaga nzira nyowani dzekutaura.
Iyi pikicha yazvino yakakurudzirawo nzira dzekubata nhetembo, zvichikonzera mune inozivikanwa se nhetembo dzinoonekwa, fomu rekuyedza rine mareferenzi akajeka muIkare Girisi mairi macaligrams ayo aizotsiviwa munguva pfupi yapfuura nemamwe mafomu enhoroondo anochengetedza.
Mune nhetembo dzinoonekwa epurasitiki art, mifananidzo kana mapikicha mafomu anotsanangura nhetembo uye zvinopesana, ichiva hybrid yekuziva uye, pamusoro pezvose, inoonekwa kwazvo. Mienzaniso inogona kutangira pane collage akajekeswa kubva pandima dzekunyora kuenda kumufananidzo uyo pachawo unotsanangura chinangwa chedetembo.
MuSpain iyo kutanga mareferenzi kudetembo rinoonekwa yakaitika muzana ramakore regumi nemanomwe, nemienzaniso yakadai se Silent Romance kune iyo Yakachena Conception naGerónimo González Velázquez. Nhetembo iyi, yakaziviswa senganonyorwa yema hieroglyphs yaiiperekedza, haina kungoita kuti kuverenga kuonekwe, asi kuendeswa kwayo kumapoka akasiyana ezvehukama kwakaita kuti ive yechinguva uye kunyange nhoroondo yekuita.
Kunyangwe iyo mienzaniso yakaverengerwa mukati memakore anotevera, pakupedzisira muzana ramakumi maviri iyo avant-gardes yeFuturism kana Cubism yaizoguma nemienzaniso yenhetembo dzinoonekwa senge yeguta remumaguta naJoan Brossa kana bhendi remimhanzi Grupo Zaj, yakaumbwa nevanyori, vanyori venziyo uye vanyori vanoona avo muma60 vakaperekedza mimhanzi yemakonzati avo nekushandisa kwezvinhu kana mashandiro ediki emitambo.
Mushure mekuuya kwezana ramakumi maviri nemasere uye kusimbiswa kwetekinoroji nyowani, nhetembo dzinoonekwa yave zvakare kuzivikanwa se cyberpoetry kana kunyangwe nhetembo dzemagetsi, zvichipiwa mikana yakawanda yainopa pasocial network uye, kunyanya, pakati pevaratidziri kana vagadziri vemifananidzo. Nekudaro, hunyanzvi hwechinguvana hwakapararira kwazvo nhasi hwawana imwe yevanonyanya kutsigira munhetembo iyi "yepurasitiki", ichipa mikana isingaperi.
Nhetembo dzinoonekwa dzinoedza, kutamba, kugadzira. Hukama hwakasarudzika pakati pezvinoonekwa uye nemavara ayo mazwi ese ari maviri anowirirana kusvika pakuwana mhedzisiro inombovhundutsa, vamwe vari vepedyo uye vashoma vanongotora mukana. Ehe, kana zvasvika kune hunyanzvi, hapana munhu akambove neshoko rekupedzisira.
Kwakatangira nhetembo dzinoonekwa
Kunyangwe iri muzana ramakumi maviri (kunyanya kutenderedza makore makumi manomwe) apo nhetembo dzinoonekwa dzinoita sedzinotanga kubudirira, chokwadi ndechekuti ichi hachisi icho chakatangira. Yakanga yakashandiswa zvakawanda kare. Muchokwadi, tiri kutaura nezvenguva dzekare, senge 70 BC. Zvingadaro sei? Kuti tiite izvi, isu tinofanirwa kuenda kune iyo Yakajeka Greece.
Panguva iyoyo, kwete chete ma greats akakunda. Paive nevanyori vemhando dzakawanda uye mhando. Uye nhetembo yekuona yaive yeumwe wavo.
Kutaura muenzaniso, unogona kuona calligram «Izai». Zviri Simmias weRhodes uye idetembo rinotevera hunhu hwenhetembo dzinoonekwa. Asi handizvo chete zvatinogona kudoma. Imwe, uye kwete kubva kuGirisi asi kubva kuFrance, iri Rabelais (kubva 1494 kusvika 1553) nhetembo yake "Sombrero".
Ko vanyori vaviri ava vaiitei? Vaida kugadzira nhetembo ine siluetti yezita raitsanangura. Semuenzaniso, mune iro zai, iyo nhetembo yese yaive mukati meiyo silhouette. Zvimwe chete neheti, kana nechero mumwe mufananidzo.
Nekudaro, mazwi, mavhesi, mazwi acho ... zvese zvakaridzwa kuti zvigadzire kurongeka kwakakwana uye kuti hapana chakasiiwa kunze kwekugadzwa kwekupedzisira. Asi zvakare yaifanira kuve nemusoro, uye yaifanirwa kuve nhetembo yakanyatsovakwa.
Zvipikiso zvezvinyorwa zvekuona
Sezvataona kare, nhetembo inoonekwa inomuka kubva kuma calligrams. Aya ndiwo mamiriro chaiwo uye nemashandurirwo aakaitwa izvo zvaunoziva izvozvi. Asi vanyori vaive zvakare, nenzira yavo, zvipikisheni zveiri nhetembo dzinoonekwa.
Semuenzaniso, vanyori vaviri kubva muzana ramakore rechiXNUMX vakamira, Guillaume Apollinaire, naStéphane Mallarmé. Ose ari maviri anoonekwa sevanyori vemazuva ano vanomiririra chirevo chekutanga chedetembo, ndiko kuti, chemalligrams. Muchokwadi, kune mabasa ake ayo iwe aungave iwe wakaona kazhinji uye uchifunga kuti iwo "echimanjemanje" nepo ivo vari ivo vashoma makore ekukura. Ivo "Eiffel Tower" kana "The Lady mune Hat."
Nhetembo dzinoonekwa muSpain
Kana iri Spain, nhetembo dzinoonekwa dzaive nemazuva ekupedzisira muma60, inguva iyo vanyori vazhinji vakabuda avo vachiri kushanda nhasi, kunyange vazhinji vavo vakafa. Vanenge vese vakatanga mune iyi chinyorwa genre senzira yekusimbisa zvematongerwo enyika uye kushoropodzwa munharaunda. Chavaida kwaive kukwevera kucherechedzwa kuhurongwa hwaive hwamisikidzwa uye kuti hwakange husisina kugadziriswa.
Mazita akafanana Musasa, Brossa, Fernando Millán, Antonio Gómez, Pablo del Barco, etc. ndiyo mimwe mienzaniso yanyanduri vanoona avo vakatsvaga kushandura nyika nezvimwe zvisikwa zvepakutanga izvo zvisina kungopinda chete nenzeve, asiwo nemeso.
Mazhinji acho achiri kushingaira, uye vamwe vari kutanga neichi chinyorwa chinyorwa. Mabasa aEduardo Scala, Yolanda Pérez Herraras kana J. Ricart anozivikanwa. Iko kune chairo runyorwa rurefu uye masocial network ivo pachavo vakaita kuti nhetembo dzinoonekwa dziwedzere sezvo paine mifananidzo yakawanda uye nziyo dziri kuita izvo zvakatanga makore apfuura nema calligrams zvichishanduka.
Mhando dzenhetembo dzinoonekwa
Nhetembo dzinoonekwa hachisi chaicho chakasarudzika. Iine mhando dzakasiyana dzinozvimisikidza zvinoenderana nezvinhu zvinoonekwa zvinoshandiswa. Nenzira iyi, unogona kuwana zvinotevera:
Nhetembo dzinoonekwa chete typographic
Mune ino kesi, inozivikanwa nekushandisa chete mavara ekuumba zvisikwa zvekutanga, izvo zvinotora kutarisisa kwevaverengi, kungave nekugovera iwo mavara mune imwe nzira, kana nekupa ruvara kune avo vanoda kukwidziridzwa, nezvimwe.
Iyo inosanganisa mavara nemadhirowa
Mune ino kesi, kwete chete mazwi enhetembo akakosha, asi mifananidzo yacho pachezvayo, iyo, kazhinji, ine hukama nemazwi. Semuenzaniso, pane mufananidzo wepini yekuchengetedza ine izwi rakapatsanurwa nenzira yekuti pini ine mabhii ekuti "kushaikwa" uye iyo "Im" inosara panosungirwa chinhu.
Iyo inokweva nemavara (ndiyo yakachena nhetembo inoonekwa, nekuti yakavakirwa pamacalligrams)
Iwo ari chaizvo iwo macalligrams ayo akapa kusimudzira kunoonekwa nhetembo. Muchokwadi, hapana vakawandisa vanozvishingisa kuzviita nekuda kwekuoma kwazvinoita, asi ichiri kuwedzera, kunyanya ichishandisa iya yevananyanduri vekare nevanyori.
Sanganisa tsamba nependi
Tinogona kutaura kuti irwo rudzi rwe nhetembo inoonekwa pakati pemufananidzo nemashoko, asi pachinzvimbo chekushandisa pikicha, iwo mufananidzo unouya mukutamba, unogona kugadzirirwa zvakatarwa, kana kushandisa imwe uye kuupa iko kudetemba kubata.
Sanganisa tsamba uye kutora mifananidzo
Izvo zvinopesana nemufananidzo kana kupenda mune iyo chaiyo mifananidzo yezvinhu inoshandiswa, kwete madhirowa kana mifananidzo yekugadzira izvo zvinhu. Nekuda kweizvi, ivo vanonyanya kuitika uye vanokanganisa zvakanyanya kana vachipa muverengi kana chero munhu anozviona kumwe kushandisa kuchinhu icho chavanogona kuve nacho pamba.
Kholaji seti yemifananidzo inoiswa neimwe nzira yekugadzira chinyorwa. Pamwe chete nemashoko, inogona kushandurwa kuita chimiro chedetembo rinoonekwa (kunyangwe mune ino kesi rinoshandiswa zvakanyanya kushambadzira kana kutengeserana zvinangwa).
Nhetembo dzinoonekwa pavhidhiyo
Icho chiitiko chitsva asi icho chiri kuwedzera, kunyanya mumasocial network. Izvo zvinoenderana nehupenyu kuti upe kuenderana kune zvigadzirwa.
Iko kushanduka kwenhetembo dzinoonekwa: cyberpoetry
Zvakafanana neiyo nhetembo dzinoonekwa dzakashanduka kubva kuma calligrams, izvi zvakare zvapa nzira kunzira nyowani yekutarisa nhetembo. Isu tinotaura nezve iyo cyberpoetry, imwe inoratidzirwa nekushandiswa kwedhijitari midhiya yekusika uye kusimudzira. Nekudaro, semuenzaniso hypertexts, animation, matatu-dimensionality, nezvimwe zvinoshandiswa. uye kunyange chimwe chinhu chisati chaonekwa, asi icho chiripo, iko kushandiswa kwechokwadi chaiko.
Nekudaro, nhetembo yekuona inoenderana zvakanyanya nehunyanzvi hwekuona kana grafiki dhizaini pane zvinyorwa, nekuti chinyorwa pachacho hachina kukosha senge chinoonekwa chese.
Iwe unofungei nezve nhetembo dzinoonekwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Chii chinonzi nhetembo yekuona?
toni prat akadaro
Nhetembo dzinoonekwa kwandiri hachisi chinhu chinopfuura kudetemba ... uye nhetembo kwandiri, ndizvo zvine kugona kufambisa vanhu kuziva uye kusaziva, izvo zvinomutsa manzwiro nekutenda uye izvo zvinokatyamadza nekutaura kwaro kusinganzwisisike uye kunakisa ...
Zvese izvi zvakadzvanywa muchirevo ...
Pindura toni prat
Dino tomasilli akadaro
Nhetembo dzinoonekwa "marara anofambira mberi", chimwe chinhu senge "Varume vane nyini" kana "vakadzi vane sikarudzi" .Kana nzanga ikaramba ichizvibvumidza kutemerwa huturu uhu, inoramba ichiderera, izvozvi zvinoitika izvo hazvisi izvo chete zvinodzidziswa nhetembo nekugadzira "yemahara vhesi" uye kunyepedzera kuti zvese zvinorutsirwa pabepa inhetembo, nekunzwa uye nemhando yevhesi, asi izvozvi vari kuda kubvisa hunhu hwekunyora, se pamwe nehunhu hwepabonde hwevana vedu, chimiro chemagariro chakanangana nemhuri, hunyanzvi hwekupenda, kuveza uye nhetembo, izvo kana zvasaswa necommunism zvinorega kuve nhetembo uye kuzova tsvina ... ramba wakadai, vadetembi vakuru yemutauro wechiSpanish unovhara mumakuva avo nguva dzese apo juri revanozviti vanyanduri vanopemberera nekupa mubayiro marara ayo akanyorwa izvozvi, nekuti hapana anotsunga kutaura kuti Mambo akashamaooooo! Kwaziso «vadetembi»
Pindura Dino Tomasilli
Chekutanga pane zvese, kumbundira kukuru kune vamwe vangu mutsamba nemifananidzo!
(Mumwe abvarura kubva kwatiri kuita chidimbu, kwandiri uyo anongoverenga bhaibheri uye muchiLatin varombo ...)
Kune vamwe, mhando yenhetembo dzinoonekwa dzandinofunga dzinonyanya kuverengeka, mu:
Blog. Zvemukati mewebhu. net
Ndatenda!! (uye chiso chakanaka kune yakaipa-vibes, senge iyo ...)
Pindura kuna grunx
Humberto Lisandro gianelloni akadaro
Nyanduri akavakwa nemapurogiramu ane mavambo ari kure uye asingadzokororwizve ... nekudaro kuyedza kupinza zvirevo zvitsva zvekunzwa kwake kwakadzika uye kwakadzika chinhu chisingadzivisike.
tor avid achasarudza kubva pakupihwa iyo inowirirana nekudengenyeka kunopfuura napo noupenyu hwake.
Pindura Humberto Lisandro gianelloni
Rudzi rwekurondedzera: Zvinhu zvekutaura